राजनीति Achives· Page2of 424
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लिम्पियधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथिको भारतीय आधिपत्य समाप्त भएको दावी गरेका छन् । सो क्षेत्रमा भारतको बर्षौदेखिको हैकम एक हदसम्म अन्त्य भएको भन्दै उनले भारतसँग आफ्नो सैनिक टुकुडी हटाउनको विकल्प नभएको जिकिर गरेका छन् । …
काठमाडौं । काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भारतीय मिडियालाई हप्काएका छन् । सीमा विवादबारे गरिएको अन्तरवार्तामा प्रस्तोताले एकोहोरोरुपमा पेलेपछि रिजालले उनलाई हप्काउँदै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको र भारते अतिक्रमण गर्दै आएको बताए । रिजालको अन्तरवार्ता अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ भने …
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले सरकारले अशक्त, अपाङ्गता र एकल महिलालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्कालका लागि रोक्ने निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले एक विज्ञप्ति जारी गरी संविधानले नै अशक्त, अपाङ्गता तथा एकल महिला …
काठमाडौं । नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडिया आक्रोशित भएको छ । रातदिन हिन्दू–मुस्लिम भनेर बहस चलाउने र जनताका एजेन्डा लुकाउने भारतीय साम्प्रदायिक मिडियाले नेपालविरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन् । जी न्यूजले त नेपाल र भारतको सैनिक संख्याको तुलना गरेर पनि देखाएको छ । …
कालापानी क्षेत्र आफ्नै भएको भारतीय जिकिर, नेपालको नयाँ नक्सा ‘कृतिम विस्तार’ भएको तर्क
काठमाडौँ । भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फीरुपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यो आफूलाई मान्य नहुने बताएका हुन् । नेपालले बुधबार कार्यक्रम गरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा …
काठमाडौं । सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् । सरकारले जेठ ५ गते नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो …
नक्सासम्बन्धी प्रकरणको अन्तर्यमा नेपालमा जसरी पनि अमेरिकी सेना छिट्टै हुल्ने षडयन्त्र देखिन्छ। किनभने, १. यसले वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी नै हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना गरी राष्ट्रघाती एमसिसि सम्बन्धित विधेयक पास गराउन सहज वातावरण बनाउने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । २. नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटेपछि नेपाललाई …
काठमाडौं । चीनले कालापानीको सिमा विवाद नेपाल र भारतको आपसी मामला भएको बताएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजानले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा कालापानी विवाद नेपाल भारतको आपसी मामला भएको बताएका हुन् । उनलाई सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका …
नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिए धन्यवाद
काठमाडौं । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रक्रिया लेख्दै उनले मुलुकको सम्पूर्ण भुभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने कार्य सराहनिय भएको पनि बताएका छन् । उनले गुमेको भूभाग प्राप्त गर्न कुटनीतिक, …
लिपुलेक नक्साको ब्याज भजाएर ओलीले देशलाई बर्बादीमा लैजाने बुझियोः डा. भट्टराई
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नक्साको ब्याज भजाएर देशलाई वर्वादीमा लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीती तथा कार्यक्रममाथी उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफ सुनेपछि डा. भट्टराईले त्यस्तो आरोप …
नयाँ नक्सा स्वीकृतिका लागि संबिधान संसोधन गर्छाैः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्शा, निशान छाप र प्रतीकचिह्नसहितको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव चाँडै संसद्मा ल्याइने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्न एवं जिज्ञासाबारे …
बाबुरामको कटाक्ष– ओलीमा अल्पज्ञान र अहंकारको भयंकर ककटेल देखियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुसँगै अन्य समसामयिक विषयमा सम्बोधन गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तीखो टिप्पणी गरेका छन् । ट्वीट गर्दै उनले कोरोना, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको व्याख्या सुन्दा उनमा अल्पज्ञान अहंकाको भयंकर ककटेल देखिएको बताएका छन् । बाबुरामले भनेका छन्, …